Alaabooyinka taxadarka daawada suuxinta ee daawada - Budada AASraw
Qalabka suuxinta ee caafimaadka
/ Products / Taxanaha Suuxinta Suuxinta
Daawada Suuxinta Suuxinta
Waxaanu nahay alaab-bixiyeyaasha dawada suuxdinta, Sumeeyaha suuxinta ee iibinta, Sidii aan ku ballanqaaday, dhammaan budooyinka Suuxinta Suuxdinta waa kuwo aan ka yarayn 98%.
Budada Suuxinta Suuxinta Guud ahaan Sharaxaad
Dhaqanka daawada (gaar ahaan qaliinka iyo ilkaha), budada suuxdinta ama suuxdinta waa xaalad kufilmaasho ama ogaansho wakhti go'an. Waxa ku jiri kara xanuunka (xanuunka ka-hortagga ama ka-hortagga xanuunka), curyaannimo (nasashada nasashada), amnesia (xasuusta lumitaanka), ama miyir beel. Bukaanka hoos yimaada saameynta daawooyinka suuxinta ayaa loo yaqaanaa suuxinta.
Budada suuxinta waxay u saamaxdaa waxqabadka aan xanuun lahayn ee hababka caafimaadka ee keeni kara xanuun daran ama aan loo dulqaadan karin bukaanka aan la daaweyn. Saddex qaybood oo ballaaran oo suuxin ah ayaa jira:
Noocaas guud ee suuxdinta ayaa xakameynaya dhaqdhaqaaqa habdhiska neerfaha dhexe iyo natiijooyinka miyir la'aanta iyo guud ahaan la'xaad la'aanta.
Sedeynta waxay cadaadisaa nadaamka dhexe ee neerfaha, in la yareeyo walaaca iyo abuurista xusuusta mudada dheer iyada oo aaney keenin miyir la'aanta.
Suuxdinta suuxdinta gobolka iyo suuxdinta gudaha, taas oo xannibaysa isu-gudbinta dareen-celinta inta u dhexeysa qaybta la beegsanayo ee jirka iyo habka dhexe ee dareenka, taas oo keenaysa in lumiso dareemida qaybta jirka lagu beegsado. Bukaanka hoos yimaada budada suuxdinta ee gobol ama deegaanku waa mid miyir-beel ah, haddii aan la qaadin suuxdinta guud ama suuxdinta isla waqti isku mid ah. Laba barasho oo ballaadhan ayaa jira:
Xannibaadda dhirta ayaa xakameysa dareemka dareenka ee qeyb ka mid ah jirka oo go'doon ah, sida is-qabsiga iliga ah ee shaqada ilkaha ama maamulida dareen-celin si loo xakameeyo dareenka oo dhan.
Dhexe, ama neuraxi, xannibaad ayaa maamula daawada suuxinta gobolka ee nidaamka dhexe ee dareenka, isaga oo xakameynaya dareenka soo socda ee ka baxsan barta blockka. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah suuxdinta laf-dhabarka iyo suuxdinta laf-dhabarka.
Marka la diyaarinayo nidaam caafimaad, bixiyaha xanaanada caafimaadka ee bixiya daawada suuxdintu waxay dooraneysaa oo ay go'aamisaa qiyaasaha hal ama dhowr daroogo si loo gaaro noocyada iyo heerarka sifooyinka suuxdinta ku habboon nooca habka iyo bukaanka gaarka ah. Noocyada daroogada loo isticmaalo waxaa ka mid ah suuxinta guud, hypnotics, sedatives, daawooyinka neuromuscular-blocking, narkotikada, iyo xanuunada.
Waxaa jira labadaba halis weyn oo yar oo suuxdin ah. Tusaalooyinka khatarta ugu weyn waxaa ka mid ah dhimashada, wadnaha wadnaha iyo xasaasiyadda sambabada halka khatarta yaryar ay ku jiri karto lalabo yaryar iyo matag iyo dib u noqoshada isbitaalka. Suurtagalnimada dhibaatada dhacaysa waxay u dhigantaa halista khatarta ah ee kala duwanaansho kala duwan ee la xiriira caafimaadka bukaan-socodka, kakanaanta qalliinka lagu sameeyo iyo nooca suuxinta loo isticmaalo. Waxyaabahan, caafimaadka qofka ka hor intaan qalliinka ahayn (oo loo qaabeeyey nidaamka qeexidda xaaladda jidheed ee ASA) ayaa ah midka ugu weyn ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah ee ka dhalan kara dhibaatada. Bukaanku caadi ahaan waxay toosaan daqiiqado gudahood daawada suuxinta oo la joojiyo oo dib loo soo celiyo dareenkooda saacado gudahood. Mid ka reeban waa xaalad la yiraahdo qallafsanaanta garashada maqnaashaha mustaqbalka fog, oo lagu gartey jahwareer joogto ah todobaadyo ama bilo, taas oo ka badan kuwa ku dhaca qalliinka wadnaha iyo waayeelka.
Waa maxay noocyada suufka suuxdinta?
Suuxdinta gudaha waxay kabuubisaa qayb yar oo ka mid ah jirka si loo sameeyo nidaamyo yar yar. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad si toos ah ugu dhajisid daawada qaliinka si aad uga xannibto xanuunka. Waxaa laga yaabaa inaad soo jeedo inta lagu gudajiro nidaamka.
Qalabka suuxdinta ee gobolka ayaa xanuunka qayb ahaan ka mid ah jidhkaaga. Waxaad sidoo kale heli kartaa daawo kaa caawisa inaad nasato ama seexato. Noocyada budada suuxinta ee goboleed waxaa ka mid ah:
Xayawaanka dhaadheer Tani waa tallaalka suuxdinta si loogu xannibmo xanuunka kudhaw dareemaha gaarka ah ama koox dareen-celin. Blocks badanaa waxaa loo isticmaalaa habraaca gacmaha, gacmaha, cagaha, lugaha, ama wejiga.
Suuxdinta suuxdinta iyo suuxdinta laf-dhabarka. Tani waa tallaalka suuxinta ee ku dhow xuddunta laf-dhabarka iyo dareemayaasha ku xiran. Waxay xanuujisaa xanuun ka yimaada gobolka oo idil, sida caloosha, miskaha, ama lugaha.
Duufka guud ee suuxdinta ayaa saameynaya maskaxdaada iyo jirka intiisa kale. Waxa laga yaabaa in lagugu sameeyo suuxdin qayb ka mid ah xidid (xidid, ama IV), waxaana laga yaabaa inaad ku neefsato suuxdinta qaar. Qalabka suuxdinta guud ee suuxdinta, waxaad miyir beeshaa mana dareemeysid xanuun marka qalitaanka lagu jiro.
Sidee ayaad hoos u dhigi kartaa halista saameynada daawada?
Waxa ugu muhiimsan ee aad sameyn karto si aad uga hortagto dhibaatooyinka budada suuxinta ayaa hubiya in dhakhtarka suuxdinta uu ku lug leeyahay daryeelkaaga. Dhakhtarka takhtarka suuxinta waa takhtar caafimaad oo ku takhasusay budada suuxdinta, maamulka xanuunka iyo dawooyinka daryeelka caafimaadka ee muhiimka ah.
Qaliinkaaga ka hor, la kulan dhakhtarka suuxdinta si uu ugala hadlo taariikhdaada caafimaad, caadooyinka caafimaadka iyo qaab nololeedkaaga. Macluumaadkani wuxuu kaa caawinayaa dhakhtarka suuxdinta inuu ogaado sidaad uga jawaabi lahayd budada suuxdinta isla markaana qaado tallaabooyin lagu yareeynayo halista waxyeellooyinka. Kulankan sidoo kale waa wakhti fiican inaad su'aalo weydiisato oo aad baratid waxa laga filayo.
Si aad u hesho alaabta ceeriin saxda ah ee alaab-qeybiyaha saxda ah micnaheedu waa wax badan, si loo xaqiijiyo tayada tayada leh, sahayda xasilloon iyo adeeg-iibka kadib.
Muujinaya dhammaan natiijooyinka 1